စင်္ကာပူရှိ လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး | ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကုန်ပစ္စည်းများ အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း။
Air Freight ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာမှမဆို လေယာဉ်ဖြင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်္ဘောပို့ဆောင်မှုနည်းလမ်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် သေးငယ်သော၊ ပေါ့ပါးသော၊ အချိန်မထိခိုက်နိုင်သော သို့မဟုတ် တန်ဖိုးမြင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် အကြံပြုထားသည်။
လေဆိပ်မှ လေဆိပ်အပါအဝင် လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးရှိပြီး၊ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်ပေါင်းစု သို့မဟုတ် ပေါင်းစုမဟုတ်သော နှင့် အန္တရာယ်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ခြင်း။.
ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ၊ လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အများအားဖြင့် တင်ပို့သည့်ပစ္စည်းများအမျိုးအစားများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာပါ။
လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများ လိုအပ်ပါသလား။ ကိုးကားမှုအတွက် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းများကို လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်လေ့ရှိသည်။
Freight Forwarder ဖြင့် Air Freight Process
လေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်သော ပို့ဆောင်မှု၊ ကျယ်ပြန့်သော ခရီးစဉ်များ၊ လုံခြုံသော ကိုင်တွယ်မှုနှင့် လွယ်ကူသော ခြေရာခံခြင်း အပါအဝင် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။
လေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးသည် အများအားဖြင့် သင်္ဘောနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုမြန်ဆန်သော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး. အထူးသဖြင့် ကုန်စည်များကို တိုတောင်းသောအကွာအဝေးမှ ရွေ့လျားသည့်အခါမျိုးတွင် ဖြစ်တတ်ပါသည်။
လေကြောင်းလိုင်းများစွာသည် ကျယ်ပြန့်သောနေရာများသို့ ပျံသန်းနိုင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ပို့ဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
လေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးသည် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရာတွင် အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး တင်ပို့မှုမှာ အနည်းငယ်သာ ကိုင်တွယ်ရလေ့ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပျက်စီးရန် အလားအလာ အလွန်နည်းပါးသည်။
ထို့အပြင် ခိုးယူမှုအန္တရာယ် နည်းပါးစေရန်အတွက် အကောက်ခွန်မှ ကုန်စည်များကို လျင်မြန်စွာ ရှင်းလင်းလေ့ရှိသည်။
လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုများကို ခြေရာခံခြင်းသည် အတော်လေးရိုးရှင်းပြီး ရှုပ်ပွနေပါသည်။ လေယာဉ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၏အကူအညီဖြင့်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဆွဲဆောင်မှုရှိရင် ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူကုမ္ပဏီသည် သင့်ကုန်စည်၏ အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။
သင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ရန် စဉ်းစားနေပါသလား။ သင်၏ပို့ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အကြံဉာဏ်ရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးနှင့် ယနေ့စကားပြောပါ။
ပို့ဆောင်မှုနည်းလမ်းသည် သေးငယ်သော၊ ပေါ့ပါးသော၊ တန်ဖိုးမြင့်ပြီး အချိန်-အထိခိုက်မခံသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် မကြာခဏ စံပြဖြစ်သည်။ လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုဖြင့် ပို့ဆောင်လေ့ရှိသည့် အချို့သောပစ္စည်းများမှာ-
လတ်ဆတ်သော ကြက်နှင့် ပင်လယ်စာ
ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူတွေ ကြိုက်တယ်။ M&P နိုင်ငံတကာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ကျယ်ပြန့်သော သင်္ဘောမိတ်ဖက်များ၏ ကွန်ရက်ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာမှ ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့် တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအတွက် အဆင့်များဖြစ်သည်-
အဆင့် 1- ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး သင်၏ကုန်တင်နှင့် ပို့ဆောင်ရေးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မျှဝေခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။
ပုံများ (ဖြစ်နိုင်လျှင်) နှင့် အတိုင်းအတာများဖြင့် ပေးပို့ရမည့် ပစ္စည်းများစာရင်း
အဆင့် 2: လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုပြင်ဆင်ပါ။
လိုအပ်သော ပို့ဆောင်ရေးစာရွက်စာတမ်းများကို ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီမှ ပြင်ဆင်ပြီး ပြီးမြောက်ရန်အတွက် သင့်ထံပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။ လိုအပ်သော ဘုံစာရွက်စာတမ်းများမှာ-
Letter of Credit ကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ
အဆင့် 3- ကုန်ပစ္စည်းများကို ဂိုဒေါင်သို့ ပို့ဆောင်ပါ။
သင့်ပစ္စည်းများကို ထုပ်ပိုးပြီးသည်နှင့်၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူသည် သင့်စက်ရုံမှ သတ်မှတ်ထားသော ဂိုဒေါင်သို့ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 4- ပို့ကုန်အကောက်ခွန်ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းရှင်းလင်းပါ။
ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီသည် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ ကုန်စည်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တင်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ပေးထားသော အချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ကွဲလွဲမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိမရှိအတွက် ကုန်စည်ကို အကောက်ခွန်အရာရှိများက စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းအောင်မြင်ပါက ၎င်းတို့ကို ပို့ဆောင်ရန်အတွက် ရှင်းလင်းမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 5- ကုန်တင်ကုန်ချနှင့် သင်္ဘောကုန်ပစ္စည်းများကို တင်ပါ။
ကုန်တင်ကုန်ချရှင်းလင်းပြီးနောက်၊ ၎င်းကို လေယာဉ်ပေါ်သို့တင်ကာ ဦးတည်ရာသို့ ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆင့် 6- သွင်းကုန်အကောက်ခွန်ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းရှင်းလင်းပါ။
လိုရာခရီးရောက်သည်နှင့် ကုန်စည်တင်သွင်းမှုဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို အကောက်ခွန်အရာရှိများက စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ရာ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး ထပ်မံလိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
မှတ်စု: ကုန်စည်ရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ရန် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး ကိုယ်စားလှယ်သည် ကုန်စည်များ ရောက်ရှိလာခြင်းမတိုင်မီ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်နိုင်သည်။
အဆင့် 7- နောက်ဆုံးမိုင်ပေးပို့ခြင်း။
ကုန်ပစ္စည်းများကို အကောက်ခွန်အရာရှိများက ရှင်းလင်းပြီးသည်နှင့် နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ ၎င်းတို့ကို သင့်အိမ်တံခါးဝမှတစ်ဆင့် ပို့ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကုန်တင်ကား.
M&P International Freights တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးစားပေးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန် ကတိပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံ 15 နှစ်ကျော်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးမျိုးသော တင်ပို့မှုနှင့် ထူးခြားသော တောင်းဆိုမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာတွင် ယုံကြည်မှုရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်အိမ်မှတစ်အိမ် ပို့ဆောင်ခြင်းမှအစ အလုံးစုံသောဘက်စုံ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအာမခံ နှင့်ပင် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး ဝန်ဆောင်မှုများ။
M&P International Freights က သင့်အား မည်သို့ကူညီနိုင်သည်ကို ရှာဖွေလိုပါသလား။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သူများကို ယခုဆက်သွယ်ပါ။
လေယာဉ်ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို မည်သူက ပို့ဆောင်သင့်သနည်း။
သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် သင့်ကုန်ပစ္စည်း၏ သဘောသဘာဝပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် သေးငယ်ပြီး ပေါ့ပါးပြီး တန်ဖိုးကြီးသော သို့မဟုတ် ပျက်စီးသွားနိုင်သော သင်္ဘောများကို လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် တင်ပို့သင့်သည်။
ပင်လယ်ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးထက် လေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးက ပိုကောင်းသလား။
လေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးသည် ပင်လယ်ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးထက် ပိုမြန်သော်လည်း စျေးပိုကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် ရွေးချယ်စရာ2ခုကြားတွင် ရွေးချယ်မှုသည် သင့်လိုအပ်ချက်နှင့် ကုန်တင်ကုန်ချမှုအပေါ် မူတည်မည်ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ရန် ပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်း အမျိုးအစားအပေါ် အကြံဉာဏ် လိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သော အတိုင်ပင်ခံများနှင့် စကားပြောပါ။ ဒီနေ့!
လေကြောင်း ပို့ဆောင်ခ ဘယ်လောက်ကျလဲ
ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို ကုန်စည်၏ အမှန်တကယ် သို့မဟုတ် ထုထည်အလေးချိန်ဖြင့် မြှောက်ခြင်းဖြင့် လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုနှုန်းကို တွက်ချက်သည်။ ကုန်စည်အမျိုးအစား၊ ဝန်ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်နှင့် မူရင်းနိုင်ငံနှင့် ခရီးဆုံးနိုင်ငံကြား အကွာအဝေးကဲ့သို့သော အခြားအချက်များသည် လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုနှုန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ quotation တစ်ခုအတွက်!